Fuel Injection Pump Test Bench ၊
Bosch Pump စည်းဝေးပွဲ
Bosch Pump အပိုပစ္စည်း
Bosch သည် အခြားသော Spare Repair Parts
Caterpillar Injector များ စုစည်းမှု
Caterpillar Pump စည်းဝေးပွဲ
Caterpillar Pump ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ
Cummins Original အစိတ်အပိုင်းများ
Cummins Injector ညီလာခံ
Cummins Pump ညီလာခံ
Cummins Pump ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ
Delphi Injector ညီလာခံ
Delphi Pump စည်းဝေးပွဲ
Delphi Pump ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ
Delphi အခြားသော ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ
Denso Injector ညီလာခံ
Denso Pump စည်းဝေးပွဲ
Denso Pump ပြုပြင်ရေး အစိတ်အပိုင်းများ
Denso အခြား ပြုပြင်ရေး အစိတ်အပိုင်းများ
တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ
အစိတ်အပိုင်းများ Injector ညီလာခံ
အစိတ်အပိုင်းများ အခြား Spare Parts များ
Valve Plate & Rod အစိတ်အပိုင်းများ
Siemens Original အစိတ်အပိုင်းများ
Siemens Injector ညီလာခံ
Siemens Pump စည်းဝေးပွဲ
Siemens Pump ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ
Siemens သည် အခြားသော ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ
အခြား Brand Original အစိတ်အပိုင်းများ
Delphi အသစ် injector 28231014 ,7206-0379 စစ်မှန်သော solenoid valve, 095000-5450 injector, 095000-9560 injector,295900-0240 injector
2022-01-05 တွင် admin မှ
Delphi မူရင်း injector အသစ် 28231014 တွင် စတော့ရှယ်ယာများ ရရှိနိုင်ပြီး Great Wall Hover H5 H6 အတွက် အသုံးပြုပါသည်။မူရင်းပြုပြင်ရေးကိရိယာ 7135-574 တွင် L379PBC ဘုံမီးရထား နော်ဇယ်နှင့် 28231014 အတွက် 9308-625C အဆို့ရှင်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ 28231014 မူလ injector အသစ်ဖောက်သည်များက အရည်အသွေးအလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ တံဆိပ်ခတ်ကောင်းပြီး ဆီပမာဏလည်း ညီသည်ဟု တင်ပြပါသည်။သင့်အား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းများနှင့် စာရင်းအင်းများရှိပါသည်။စစ်မှန်သော ဆိုလီနွိုက်အဆို့ရှင် 7206-0379 ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင် စတော့ခ် ava...
2022 နှစ်သစ်တွင် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော CRS-206C စမ်းသပ်ခုံတန်းလျား မိတ်ဆက်ခြင်း။
2021-12-27 ရက်နေ့တွင် admin မှ
လေးစားအပ်ပါသော မိတ်ဆွေများ နှင့် ဖောက်သည်များ ၊ Time သည် 2021 နှစ်၏ နောက်ဆုံးပတ်ဖြစ်သည်။2021 တွင် သင်၏ပံ့ပိုးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ နှစ်သစ်ကိုရောက်တော့မည်။Taian Common Rail Industry & Trading Co., Ltd မှ သင့်အား ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံပြီး တစ်နှစ်တာပတ်လုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်ကိရိယာများထုတ်လုပ်သည်- ဘုံရထားထိုးဆေးစမ်းသပ်ခုံတန်းရှည် (ရောင်းစျေးပူမော်ဒယ်- CRS-206C၊ CRS-200C၊ CRS-308C၊ CRS-205C) ဘုံရထားလမ်းထိုးသွင်းကိရိယာနှင့် ပန့်တင်စမ်းသပ်ခုံတန်းရှည် (ရောင်းစျေးပူမော်ဒယ်- CRS-708။ ။ .
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရစ္စမတ်နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်းကောင်းအတွက် လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပါ။
ချစ်လှစွာသောမိတ်ဆွေ၊ ပြီးခဲ့သောတစ်နှစ်တာလုံးတွင်သင်၏ယုံကြည်မှုနှင့်ပံ့ပိုးမှုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် လာမည့် 2022 ခုနှစ်တွင် ပိုမိုထူးချွန်မှုနှင့် ရည်မှန်းချက်များကို အတူတကွ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါစေကြောင်း ရိုးသားစွာဆန္ဒပြုပါသည်။ ပိုမိုကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများဖန်တီးရန် ပိုမိုနီးကပ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စောင့်မျှော်နေပါသည်။သင်နှင့် သင့်မိသားစု ကျန်းမာ ချမ်းသာခြင်း နှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။ဒီနေ့တင်မကဘဲ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။ပထမဦးစွာ Delphi စစ်မှန်သောသေခြင်းကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါကသင်အတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိသည် ...
မော်ဒယ်အသစ် Common Rail Injector စမ်းသပ်ခုံတန်းလျား CRS-318C
2021-12-13 ရက်နေ့တွင် admin မှ
CRS-318C common rail test bench သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ် သီးခြားလွတ်လပ်သော သုတေသနပြုထားသော အထူးကိရိယာဖြစ်ပြီး ဖိအားမြင့်ဘုံရထားထိုးဆေးနှင့် injector အစိတ်အပိုင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် ၎င်းသည် BOSCH၊ SIEMENS၊ DELPHI၊ DENSO နှင့် CATERPILLAR တို့၏ ဘုံရထားလမ်းကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။၎င်းသည် ဘုံမီးရထားမော်တာ၏ ဆေးထိုးနိယာမကို လုံးဝအတုယူကာ ပင်မဒရိုက်သည် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုဖြင့် အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကို လက်ခံသည်။မြင့်မားသောအထွက် torque၊ အလွန်နိမ့်သောဆူညံသံ၊ ရထားလမ်းဖိအားတည်ငြိမ်သည်။Pump speed, injection pulse width နဲ့ rail pressure တွေကတော့...
ထုတ်ကုန်အသစ် CRS-708S ထုတ်ဝေသည်။
2021-12-06 တွင် admin မှ
CRS-708S စမ်းသပ်ခုံတန်းသည် ဖိအားမြင့်ဘုံရထားပန့်နှင့် ထိုးသွင်းကိရိယာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန် အထူးကိရိယာဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ဘုံရထားပန့်၊ BOSCH၊ SIEMENS၊ DELPHI နှင့် DENSO နှင့် piezo injector တို့ကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။၎င်းသည် ပိုမိုတိကျပြီး တည်ငြိမ်သောတိုင်းတာမှုဖြင့် ဘုံရထားအင်ဂျယ်တာနှင့် ပန့်ကို စီးဆင်းမှုအာရုံခံကိရိယာဖြင့် စမ်းသပ်သည်။ဤအခြေခံအရ ၎င်းကို ရွေးချယ်နိုင်သော EUI/EUP စမ်းသပ်မှုစနစ်၊ CAT HEUI စမ်းသပ်စနစ်ဖြင့်လည်း တပ်ဆင်နိုင်သည်။Pump speed, injection pulse width, oil measurement နှင့် rail pressure အားလုံးကို အတွင်းမှ ထိန်းချုပ်ပါသည်။
Promotion China Made CAT Series၊DENSO Series injectors၊DELPHI မူရင်း 625C၊622B၊621C၊72069-0440၊7206-0460၊China UD F00VC45200၊F00VC01502
2021-11-19 ရက်နေ့တွင် admin မှ
BOSCH DENSO DELPHI CATERPILLAR SIEMENS VOLVO CUMMINS စသည်တို့ အမှတ်တံဆိပ် Pump၊ injector၊ nozzle၊ valve၊ sensor စသည်တို့ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် Delphi၊ Liwei၊ Greenpower၊ Weifu၊ Xingma စသည်တို့ဖြစ်သည်။အမှတ်တံဆိပ်အေးဂျင့်၊ အရောင်းချန်ပီယံ။ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်လည်ပတ်ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ မိတ်ဆွေများကို ကြိုဆိုပြီး ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ပါ။ပရိုမိုးရှင်း- တရုတ်လုပ် CAT စီးရီးအင်ဂျယ်တာ 326-4700၊ 32F61-00062;320-0680/2645A747၊၃၂...
denso မူရင်းအင်ဂျယ်တာ 095000-6244,16600-VM00D (MB40E)
2021-11-10 ရက်နေ့တွင် admin မှ
denso original injector 095000-6244,16600-VM00D (MB40E) ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီသည် သင့်အား BOSCH, DENSO, DELPHI, CUMMINS, Cat စစ်မှန်သော ဒီဇယ်အပိုပစ္စည်း အမျိုးအစားများစွာဖြင့် ပေးဝေနိုင်ပါသည်။အပြင် အရည်အသွေးမြင့် တရုတ် အပိုပစ္စည်း၊ ဘုံရထား အင်ဂျော်၊ လောင်စာပန့် စမ်းသပ်ခုံတန်းများ
100% BOSCH Original control valve F00RJ02429 injector အတွက် 0445120178 0445120233 0445120258
2021-11-06 တွင် admin မှ
Brand : BOSCH Nature : စစ်မှန်ပြီး မူရင်း အရည်အသွေးမြင့် Size : standard size Material : steel Used For : 0445120178 0445120233 0445120258 စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းကာလ တစ်ပတ်ရက်စွဲ !
စစ်မှန် VDO ပန့် BK2Q9B395AD၊BK2Q-9B395-CB စစ်မှန်သောပန့် A2C5334443၊A2C96443200၊BK2Q9B395CB ၊5ws40693
VDO ပန့် / စစ်မှန်သော မူရင်းပန့်အသစ် ၊ အရည်အသွေးမြင့် ထုပ်ပိုးမှုအသစ်ဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် VDO/SIEMENS ပန့် BK2Q9B395AD၊BK2Q-9B395-CB၊A2C5334443၊A2C96443200၊BK2Q9B39407CB 730% မူရင်းအရွယ်အစား A2C96443200၊BK2Q9B3940CC5အင်ဒိုနီးရှား၊ ရုရှား၊ အီရန်၊ အမေရိကန်၊ အီကွေတာ တွင် ရောင်းအားကောင်းသည်။
UNITED DIESEL ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင် F00RJ01692 0445120129 0445120153 0445120081၊
2021-10-25 ရက်နေ့တွင် admin မှ
ပစ္စည်း : ဒီဇယ်လောင်စာ ထိုးဆေး ထိန်းချုပ် အဆို့ရှင် မော်ဒယ်:F00RJ01692 Injector : 0445120129 0445120153 0445120081 Stock: in stock အမှတ်တံဆိပ်: UD အသစ်စက်စက်
ဈေးနှုန်းကောင်း China made ဒီဇယ်အင်ဂျယ်တာ 095000-8290,095000-5881,095000-7781,095000-7761,095000-9780,295050-0520.295050-0460
2021-10-23 ရက်နေ့တွင် admin မှ
in stock China UD Diesel Injector 095000-8290 for common rail 23670-0L050,23670-09330,9709500-778 in stock China UD ဒီဇယ် injector 095000-7781 common rail injector 2KD293030F 30D China UD 296030F 30D30D-9030F 30TV အတွက် -7761,23670-30300 for common rail injector Assy 23670 0L010,23670-09060 9709500-776 for HILUX 2KD in stock China UD ဒီဇယ် injector 095000-9780-51090776 As common rail301510909109076 59037 in stock China UD Diesel Injector 295050...
Toyota HILUX စစ်မှန်သော G4 valve nozzle injector နှင့် pump အားလုံးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
2021-10-16 ရက်နေ့တွင် admin မှ
မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်တို့တွင် G4 အဆို့ရှင်ဟု လူသိများသော စစ်မှန်သော ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင် 295040-9440 ရရှိထားပါသည်။၎င်းသည် ပလတ်စတစ် သေးငယ်သော အကွက်များဖြင့် ပါလာသော မူလအဆို့ရှင်အသစ်ဖြစ်သည်။လောင်စာဆီထိုးသွင်းကိရိယာ 23670-0E010 နှင့် 23670-0E020 အတွက် အသုံးပြုသည်။Nozzle G4s008 295771-0080 ကို injector 23670-0E020, 295700-0560 အတွက် အသုံးပြုသည်။မူရင်းအသစ်ဖြစ်ပြီး ဂိုဒေါင်တွင် ရနိုင်ပါသည်။Nozzle G4s009 295771-0090 ကို injector 23670-0E010, 295700-0550 အတွက် အသုံးပြုသည်။မူရင်းအသစ်ဖြစ်ပြီး ဂိုဒေါင်တွင် ရနိုင်ပါသည်။ဘုံမီးရထားအစစ်အမှန်...
Bosch injector - 120 စီးရီးအတွက် နော်ဇယ် ဇယား
2021-10-07 တွင် admin မှ
Bosch Injector အတွက်နှင့်ကိုက်ညီသော nozzle - 120 စီးရီး 1 Dlla 147p 5380433 171 348 045 045 045 120 002 09864350 002 09864355244DSLA 143p 970 045 120 007 570 0075DSLA 158p 974 +0445 120 008 098643550 008 0989 045 120 009/0100445 120 0011 09/010 045 010 0943 045 011 0943 045 041 094/019 9410218 0986435517 11 DLLA 118P 13570445 120 029 12...
Caterpillar 326-4700 320-0680 320-0690 ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရေး
2021-09-26 ရက်နေ့တွင် admin မှ
CAT injector & pump ပရိုမိုးရှင်း- Caterpillar အားလုံး မူရင်းနှင့် အသစ်။326-4634 315D 326-4635 320D/C6.4 CAT 319-0677,10R8899 C9/325D/330D/336DL 557-7627/387-9427/263-84258C/373-84218/393 C9 CAT 336၊ 20R8064 320-0677/ 2645A746 323D/C6.6 320-0680/ 2645A747(10R7672) 320-0690/ 2645A747 3029-9019၊
ဆေးထိုးပန့် စမ်းသပ်စက် CRS-825C ဘုံရထားထိုးဆေး စမ်းသပ်ခုံ EPS708 တရုတ်ရွေးချယ်နိုင်သော HEUI C7/C9 EUI/EUP
CRS-825C test bench သည် ဖိအားမြင့်ဘုံရထားပန့်နှင့် injector များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်ရန် အထူးကိရိယာဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် common rail pump၊ injector နှင့် piezo injector တို့ကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။၎င်းသည် ပိုမိုတိကျပြီး တည်ငြိမ်သော တိုင်းတာမှုဖြင့် common rail injector နှင့် pump ကို flow meter sensor ဖြင့် စမ်းသပ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ တိကျသောတိုင်းတာမှုနှင့် အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု။လက္ခဏာရပ်များ 1.Main drive သည် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုဖြင့် အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကို လက်ခံပါသည်။2. အချိန်နှင့်တပြေးညီ စက်မှုကွန်ပြူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော Windows oper...
လျှပ်စစ်ဒီဇယ်ဘုံရထားထိုးဆေး စမ်းသပ်ကိရိယာ ခုံတန်းလျား CRS-708C
2021-09-14 တွင် admin မှ
CRS-708C သည် flow meter sensor ဖြင့် common rail pump နှင့် injector ကိုစမ်းသပ်နိုင်ပြီး Piezo injector သည်လည်း HP0 pump ကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်။ဒေတာကို ကွန်ပျူတာဖြင့်လည်း ရယူနိုင်ပြီး 19 လက်မ LCD မျက်နှာပြင်ဖြင့် ဒေတာများကို ပိုမိုရှင်းလင်းစေသည်။၎င်းသည် drive singal modulation နှင့် forced-cooling system၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ တိကျသောတိုင်းတာမှုနှင့် အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှုကို လက်ခံပါသည်။CRS-708C သည် အင်တာနက်ဖြင့် အဝေးထိန်းအကူအညီကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် လွယ်ကူစေသည်။ထူးခြားချက်- 1. ပင်မ drive ကိုလက်ခံကျင့်သုံးသည်...
common rail pump နှင့် injector နှင့် piezo injector တို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို flow meter sensor ဖြင့် စမ်းသပ်ပါ။၎င်းကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စက်မှုကွန်ပြူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ဒေတာကိုလည်း ကွန်ပျူတာဖြင့် ရယူသည်။19 LCD မျက်နှာပြင် မျက်နှာပြင်သည် ဒေတာများကို ပိုမိုရှင်းလင်းစေသည်။CRS-708C သည် အင်တာနက်ဖြင့် အဝေးထိန်းအကူအညီကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် လွယ်ကူစေသည်။အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ တိကျသောတိုင်းတာမှုနှင့် အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု။
bosch၊ denso၊ CAT၊ delphi၊ cummins၊ siemens မူရင်းအပိုပစ္စည်း
2021-09-09 တွင် admin မှ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် သင့်အား BOSCH၊ DENSO၊ DELPHI၊ CUMMINS၊ Cat စစ်မှန်သော ဒီဇယ်အပိုပစ္စည်း အမျိုးအစားများစွာဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။အပြင် အရည်အသွေးမြင့် တရုတ်အပိုပစ္စည်း၊ ဘုံရထားထိုးဆေး၊ လောင်စာပန့်စမ်းသပ်ခုံ၊EUI-EUI ယူနစ်ပန့်စမ်းသပ်ခုံ၊ HEUI အင်ဂျတ်စမ်းသပ်ခုံ။တိုင်ပင်ဖို့ကြိုဆိုပါတယ်။
bosch မူလလောင်စာပန့် 0445010568 0445010565 0445010532
2021-09-07 တွင် admin မှ
Bosch injector လေဖြတ်ခြင်းတိုင်းတာခြင်းကိရိယာ
EPS205 Diesel common rail injector test bench သန့်ရှင်းရေး injectors လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ injector သန့်စင်စက် CRS-206C
2021-09-04 တွင် admin မှ
ယူရို5အဆို့ရှင် T206,T201,T202, F00VC45200 F00VC45204 injector အတွက် 0445110520 0445110418/522/562/598။ ။
ပရိုမိုးရှင်းများ- စစ်မှန်သော actuator များ၊ Bosch စစ်မှန်သော valve နှင့် Denso စစ်မှန်သော injector
admin မှ 2021-08-28 ရက်နေ့တွင်
လတ်တလောတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် လာမည့်စျေးဝယ်ရာသီများအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် ပရိုမိုးရှင်းများစွာရှိသည်။1. စစ်မှန်သော Delphi solenoid valve 7135588 7135-588 ၏ EUI injector 21340612၊BEBE4D24002,21582094,21340611,7206-0379,720612၊BEBE4D24002,21582094,21340611,7206-0379,7206-04260 ၏မူရင်း လောင်စာဆီများ နှင့် BC2260 တို့တွင်လည်း လောင်စာဆီ အစိတ်အပိုင်းများ အားလုံးပါရှိပါသည်။ လျှော့စျေး။2. Denso စစ်မှန်သော common rail injector 095000-9770 နှင့် 095000-9780 တို့ကို ရောင်းချပေးနေပါပြီ၊ ၎င်းတို့သည် အလွန်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လက်ခံပါသည်...
ပရိုမိုးရှင်းများ- စစ်မှန်သော CAT စက်သုံးဆီပန့်နှင့် ဘုံရထားထိုးဆေးများ ;Denso G4 valve နှင့် Delphi 625C အဆို့ရှင်
လတ်တလောတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် လာမည့်စျေးဝယ်ရာသီများအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် ပရိုမိုးရှင်းများစွာရှိသည်။1. စစ်မှန်သော Caterpillar လောင်စာဆီပန့်များနှင့် ဘုံရထားထိုးဆေးများ၏ အရောင်းမြှင့်တင်မှု။ရောင်းချသည့်ထုတ်ကုန်များတွင်- 315D အတွက် ဆီပန့် 326-4634၊ 320D/C6.4 CAT pacing အတွက် 326-4635 လောင်စာပန့်၊ C9/325D/330D/336DL အတွက် လေလံတင်ပန့် 319-0677 လက်ဝါးကပ်တိုင်နံပါတ် 0R8899။Common rail injectors များတွင် C7/325D အတွက် 557-7627/387-9427/263-8218၊ 557-7633/387-9433/254-4339 Ｃ9 excavator 20R8064၊ 3720-2067 အတွက် 557-7633/387-9433/254-4339
Taian Common Rail လုပ်ငန်း
2021-08-09 တွင် admin မှ
Taian Common Rail Industry & Trading Co., Ltd. သည် 2009 ခုနှစ်မှစတင်၍ taian မြို့ shandong ပြည်နယ်ရှိ ဒေသခံဖြစ်သည်။တရုတ်နိုင်ငံရှိ အကြီးမားဆုံး ဘုံရထား အပိုပစ္စည်း ပေးသွင်းသူ တစ်ဦး၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မှ အောက်ပါ ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်- 1. လောင်စာဆေးထိုးပန့် စမ်းသပ်ခုံ၊ ဘုံရထား စမ်းသပ်ခုံ၊ EUI-EUP စမ်းသပ်ခုံတန်းလျား၊ HEUI စမ်းသပ်ခုံတန်းရှည် စသည်တို့ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အဆင့်မြင့် အဆင့်တွင် ကျွမ်းကျင်စွာ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ .ကျွန်ုပ်တို့၏ “COMMON” အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များသည် အော်တိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ပရောဂျက်ပစ္စည်းနှင့် ဆီပန့်နှင့် အင်ဂျတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော နယ်ပယ်အားလုံးကို ဖြန့်ကြက်ထားသည်။အို...
Bosch injector အတွက် ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်၏ ဇယား
Bosch injector အတွက် ထိန်းချုပ်မှု အဆို့ရှင် ဇယား- နံပါတ် အဆို့ရှင် မော်ဒယ် နံပါတ် အင်ဂျယ်တာ မော်ဒယ် နံပါတ် 1 F 00R J01 159 0445 120 024/026/0272F 00R J01 218 0445 120 0303F 05577040401/2f0000r j0 j01 451 0445 0445 0445 0445 0445 0445 70 066/0676F 0.0R J01 5227f 0000r j01 533 8f0000r j0 j01 5337 0.78/124/247 078/124/247 90 f0r j01 704 0445 0445 156/160/164/165/225 10 F 00R J01 727 0445 120 086/087/127/166 11 F 00R J01 683 12 F 00R J01 692 044...
ယနေ့ပရိုမိုးရှင်းတွင် Bosch ဘုံရထားအင်ဂျယ်တာထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင် F00VC01346 အတွက် 0445110 253/254/257/258/269/270/726
2021-08-06 တွင် admin မှ
ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်အမှတ်တံဆိပ် injecor အဖြစ်များသည့်ရထားလမ်း: Bosch မူရင်းသက်ဆိုင်သော injector: 0445110253,0445110254,0445110257 0445110258,0445110269,0445110270 0445110726 0445110 253/254/257/258/269/270/726 ကုန်ပစ္စည်းနာမအဘို့ယနေ့မြှင့်တင်ရေး Bosch ရဲ့ဘုံရထားလမ်း injector ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင် F00VC01346
Common rail injector 095000-5600,6218-11-3100,8-9760978-6,DENSO ORIGINAL AND Brand New အသစ်ရောက်ပါတယ် စျေးနှုန်းလဲသင့်တယ်
2021-08-04 တွင် admin မှ
Common rail injector 095000-5600,6218-11-3100,8-9760978-6,DENSO ORIGINAL AND Brand New အသစ်ရောက်ပါပြီ စျေးနှုန်းလည်းသင့်တင့်ပါသည်။
ယနေ့ပရိုမိုးရှင်း Delphi မူရင်းစစ်မှန်သော injector control valve 9308-621C၊28538389၊28239294,28440421
2021-08-03 တွင် admin မှ
Delphi မူရင်းစစ်မှန်သော injector ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင် 9308-621C,28538389,28239294,28440421 ပမာဏကြီးမားသော ဝယ်ယူမှုပမာဏသည် ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ လိုအပ်ပါက မြန်မြန်တက်ပါ။
ယနေ့ promotion Bosch original စစ်မှန်သော CP1H oil pump 0445010169, 0445010182
2021-08-02 တွင် admin မှ
Bosch မူရင်း စစ်မှန်သော CP1H ဆီပန့် 0445010169, 0445010182 နှင့် 0445010158,0446010159,0445010165,0445010169,0445010200,04401010103
VDO BK2Q-9K546-AG A2C59517051 FORD သေတ္တာ ရရှိနိုင်ပါသည်
2021-07-31 ရက်နေ့တွင် admin မှ
0445120218/0445120217 အတွက် bosch မူရင်း injector control valve F00RJ02466 အတွက် အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း
2021-07-22 တွင် admin မှ
မူရင်း BOSCH piezo injector 0445116017 နော်ဇယ်အသစ် 0445116018 အတွက် 33800-2F001
Q7 အတွက် BOSCH မူရင်း 0445117021 ,0445117022,0445117082,0445117021,0445117076
2021-07-13 တွင် admin မှ
VW Amarok 2.0dVW Multivan VW Transporter 2.0dအတွက် မူရင်း BOSCH injector 0445116034,0445116035,03L130277C
2021-07-12 တွင် admin မှ
Delphi စစ်မှန်သောထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင် 9308-625C၊28604457၊28651416 injector Assy 28229873၊28236381၊EMBR00301D
2021-07-05 တွင် admin မှ
Delphi စစ်မှန်သောထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင် 9308-625C၊ 28604457,28651416 လျှောက်လွှာ: injector Assy 28229873,28236381,EMBR00301D အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၌ယခုအထူးစျေးနှုန်းရှိသည်၊ သင်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
John Deere common rail injector စစ်စစ် 095000-6311 095000-6490 ရောင်းမည်
2021-07-03 တွင် admin မှ
John Deere အတွက် စစ်မှန်သော Denso common rail injector 095000-6311 နှင့် 095000-6490 ကို ယခု ရောင်းချပေးနေပါပြီ၊ ၎င်းတို့သည် 100% မူရင်း common rail injector များဖြစ်ပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော လျှော့စျေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။သင်စိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။
delphi မူရင်းအဆို့ရှင် 7135-588 ပရိုမိုးရှင်းများ
2021-06-23 ရက်နေ့တွင် admin မှ
စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် ဖောက်သည်များအတွက် အကျိုးရှိစေရန်။delphi မူရင်းအဆို့ရှင် 7135-588၊ စျေးနှုန်းသင်ယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ပရိုမိုးရှင်းများ- Caterpillar မူရင်း injector & pump
2021-06-12 ရက်နေ့တွင် admin မှ
Caterpillar original injectors & pumps big promotion: 326-4700 326-4740 326-4756 320-0677 557-7633 320-0680 321-3600 321-0990 20R80608 20R80608 20R806060 30961607 3096608 6096165696169356961656096156961653961653261658 မှ 321-0990၊
အရောင်းရဆုံးစက်-CRS-206C ဘုံရထား အင်ဂျယ်တာ စမ်းသပ်စက်
2021-05-07 တွင် admin မှ
CRS-206C common rail injector tester သည် BOSCH၊ SIEMENS၊ DELPHI နှင့် DENSO ၏ common rail injector နှင့် piezo injector တို့ကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။BIP Functin၊ QR ကုဒ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရရှိနိုင်သည်။Windows လည်ပတ်မှုစနစ်၊ Linux လည်ပတ်မှုစနစ် နှစ်မျိုးလုံး ရရှိနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် EUI/EUP နှင့် HEUI စမ်းသပ်ခုံတန်းလျားအမျိုးအစား
2021-03-17 တွင် admin မှ
2021 ခုနှစ်အစတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စမ်းသပ်ခုံတန်း HU-200 အမျိုးအစားအသစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။HU-200 စမ်းသပ်မှု EUI/EUP နှင့် HEUI။BOSCH၊ CUMMINS၊ DELPHI၊ CAT၊ VOLVO၊ SCANIA စသည်ဖြင့် EUI/EUP ပါ၀င်ပြီး Caterpillar C7/C9 HEUI ဟိုက်ဒရောလစ် ဘုံရထား ထိုးဆေးကိုလည်း စမ်းသပ်ပါသည်။ဒေတာအား 19" LCD ဖန်သားပြင်ဖြင့် အလိုအလျောက် နှိုင်းယှဉ်ပြီး အမှားရှာစစ်ဆေးပါသည်။ စမ်းသပ်ခုံတန်းသည် ယာဉ်မောင်းအချက်ပြမှု မော်ဂျူးကို လက်ခံသည်၊ ထိန်းချုပ်မှု တိကျမှု မြင့်မားသည်၊ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တည်ငြိမ်သည်။ ...
မူရင်း bosch အစိတ်အပိုင်းများ ပရိုမိုးရှင်းများ
bosch မူရင်းအပိုပစ္စည်းပရိုမိုးရှင်းများ၊ ဤလျှော့စျေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။ဝယ်ယူဖို့ကြိုဆိုပါတယ်။100% bosch မူရင်း၊ 100% အသစ်။ပရိုမိုးရှင်း မော်ဒယ်နံပါတ် F00RJ01278 F00RJ01714 F00RJ02429 F00RJ01428 F00RJ01479 F00VC01329 0445116034 0445116064 0445010830 0445010830 0445010832 0445010832
326-4700 CAT injector, made in china, discount on sale.
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် CAT injector ၊ အရည်အသွေးမြင့် ပရိုမိုးရှင်းများဖြင့် ရောင်းချပေးနေပါပြီ။မော်ဒယ်နံပါတ် 326-4700 326-4756 10R7575 320-0680 320-0690 2645a749 320-459A749 320-0690 2645a749 320-4745a749 320-475A751 2645A7533838 အခြားမော်ဒယ်နံပါတ်လိုအပ်ပါကအသေးစိတ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Dongyue လမ်းအရှေ့ဘက် Taian မြို့ Shandong ပြည်နယ်
Delphi အသစ်ထိုးဆေး 28231014 ၊7206-0379...
2022 နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ CRS-206C ရောင်းအား...
ပျော်ရွှင်စရာ Christmas လေးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်...
မော်ဒယ်အသစ် Common Rail Injector Test Bench...
© မူပိုင်ခွင့် 20102021 : All Rights Reserved. >